ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ် ရှိ ရောင်းရန် ကမာရွတ်မြို့နယ် သီရိမင်္ဂလာ( အားတီးယား) လမ်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုခန်းရောင်းမည်., ကွန်ဒို | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - ကွန်ဒို - ကမာရွတ်မြို့နယ် သီရိမင်္ဂလာ( အားတီးယား) လမ်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုခန်းရောင်းမည်.
ကမာရွှတ်မြို့နယ် သရိမင်္ဂလာ ( အားတီးယား ) လမ်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုခန်း ရောင်းမည် ။ Size - 1750 Sqft (5- Floor ) မာစတာအိပ်ခန်း (2) ခန်း / ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ( 1 ) ခန်း အဲယားကွန်း (4) လုံး / အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ကားပါကင်ပါ / အရှေ့ဘက်လှည့် Lift ( ဓါတ်လှေခါး ) ပါ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းဖြင့်ဆတ်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်.
အိမ်ခြံမြေ အမည် : ကမာရွတ်မြို့နယ် သီရိမင်္ဂလာ( အားတီးယား) လမ်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုခန်းရောင်းမည်.
Fully Furnished Condo for Rent in Kamaryut not Far from MICT
Inya View Condo For Sale (ID-671)
Mini Condo For Sale (ID-676)
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်း လမ်းသွယ်ရှိရောင်းရန်ရှိသောကွန်ဒိုတိုက်ခန်း(Malihku Real Estate)
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ဦးဝိစာရလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောကွန်ဒိုတိုက်ခန်း(Malihku Real Estate)
ကမာရွတ်မြို့နယ် အောင်မြေသာစည်အိမ်ယာ အနီးရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုခန်းရောင်းမည်
ကမာရွတ်၊ ရွှေထန်းပင်ကွန်ဒိုရှိ ရောင်းရန်ရှိသော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
ကမာရွတ်၊ရွှေထန်းပင် ကွန်ဒိုရှိရောင်းရန်ရှိသော အလွှာမြင့် အခန်း
ကမာရွတ်၊ ခိုင်ရွှေဝါကွန်ဒို ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော အလွှာမြင့်အခန်း ကွန်ဒိုအခန်း (Malihku Real Estate)
ကမာရွတ်၊ စိန်ရတနာကွန်ဒို ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော အခန်း (Malihku Real Estate)
အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး Diamond Condo ရောင်းမည်
ကမာရွတ်၊ High Way Complex ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော အခန်း (Malihku Real Estate)
ကမာရွတ်၊ ခိုင်ရွှေဝါကွန်ဒို ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော အခန်း (Malihku Real Estate)
ကမာရွတ်၊ ရွှေစံပါယ်ရိပ်မွန် ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော အခန်း (Malihku Real Estate)
ကမာရွတ်၊ ရွှေထန်းပင်ကွန်ဒို ရှိ ရောင်းရန် ရှိသောကွန်ဒိုတိုက်ခန်း ( Malihku Real Estate)
CSA-043 Diamond Condo တွင် အကျယ်(1350)Sqft ရှိအခန်း အမြန်ရောင်းမည်။
CSA-038 ဘုရင့်နောင်တာဝါတွင် အကျယ်(1560)Sqft ရှိအခန်း အမြန်ရောင်းမည်။
High Way Complex
ဖုန်းဆက်ရန် 09 77 99 33 549 / 09 42 6767 567